नरुनु छविनाथ सर, आँसु पुछ्नु ! - OneZero News
छविनाथ सर आज रोइरहनु भएको छ । उहाँको आत्मा रोइरहेको छ ।
‘बाबु तिमी पत्रकार मान्छे यो कुरा चाहिँ नलेख्नु है !’ उहाँले भन्नुभयो, ‘किनभने हामीले भोलि पनि यही समाजमा मिलेर बाँच्नु छ ।’
के हो यो ? मैले इनरुवा छोड्नुभन्दा अघिसम्म त उहाँले मसँग कहिल्यै यस्ता कुरा गर्नुभएको थिएन । यो दस वर्षमा, यो के परिस्थिति विकास भयो इनरुवामा कि आज सार्वजनिक ठाउँमा छविनाथ सरले रुँदै बोल्नुप¥यो ?
उहाँसँग पछिल्लोपटक प्रतिक्षण दैनिकको कार्यालयमा भेट भो । म इनरुवाको मेयरमा राजन मेहतालाई जिताउनु पर्छ भन्ने अभियान लिएर घुमिरहेको थिएँ । उहाँ दक्षिणतिर टेबुल छेउमा सोफामा बसेर हालसालै निस्किएका प्रतिक्षण दैनिकका दुई वटा अङ्क हातमा लिएर पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ । म चाहिँ इकवाल अहमद भाइलाई खोज्दै त्यहाँ गएको थिएँ । किनकि प्रतिक्षण दैनिकमा एक दिनअघि मैले छाप्नु प¥यो भनेर एउटा लेख दिएको थिएँ । तर, छापिएन । किन छापिएन ? त्यो लेख उनको पत्रिकामा छाप्न उनको विवेकले किन दिएन ? के कसैले उनलाई पैसा दिएर त्यो लेख नछाप्न भन्यो ? के राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी वा उनका समर्थकहरूले यो लेख आज चाहिँ नछाप्नू, भोलि जे हुन्छ देखा जाला भने ? कि कमल थापावालाहरूले खबरदार यो लेख छाप्न पाउँदैनस् भने ? कि मनोज मेहता, जो आज इनरुवा नगरको मेयर हुन चाहिरहेका छन्, उनले ‘हे, इकवालजी यो लेख छाप्नु पर्दैन भने ? कि मेरो साथी किरण पोखरेलले यो लेख पत्रकार आचारसंहिता विपरीत छ, छाप्नुहुँदैन भने ? आखिर के परिस्थिति बन्यो र यो लेख इनरुवाको पत्रिकामा छापिएन ?
लेख किन छापिएन ? के त्यो लेख छाप्दा इनरुवामा हाल कायम सामाजिक सद्भाव खल्बलिन सक्थ्यो ? कि त्यो लेखको अन्तर्य कुनै दल विशेषको हार वा जितसँग मात्र सीमित थियो ? आखिर त्यस्तो के कुरा थियो, मैले छाप्न दबाब दिँदा–दिँदै पनि इकवाल भाइ ‘सरी दाइ ! यसपटकलाई यो लेख नछाप्ने निर्णय गरियो,’ भन्न बाध्य भए ? निर्णय गरियो भन्नाले उनले एकल निर्णय गरे कि केही व्यक्तिहरू जोसँग उनको कुरा मिल्छ, जो उनका सल्लाहकार हुन्, उनीहरूसँग सल्लाह गरेर निर्णय गरे ? यदि एकल निर्णय गरेका हुन् भने किन त्यस्तो निर्णय गरेका हुन् ? होइन यदि सामूहिक निर्णय गरेका हुन् भने अरूहरूले किन त्यो लेख रोक्न सल्लाह दिए ? यो निकै गम्भीर र जवाफ दिन ठुलै साहस चाहिने प्रश्न हो । तर, मलाई मेरा हरेक प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ । म यतिबेला मेरा मनमा उठिरहेका प्रश्नहरूको जवाफ खोज्दा–खोज्दा कति परसम्म पुग्न खोज्दैछु ? र, म पुग्नुपर्ने गन्तव्य कहाँसम्म हो ? मलाई थाहा छैन । कृपया कसैले मलाई बताइदेओस् ।
यहाँनेर एउटा निकै गम्भीर प्रश्न पनि मेरा मनमा आएको छ । यो देशमा एउटा पत्रिकाको सम्पादकलाई यो कुरा छाप र यो कुरा नछाप भनेर उसका साथी, गुरु, मिडिया मालिक वा अरू कसैले दबाब दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? मिल्दैन भने किन मिल्दैन ? र, मिल्छ भने के–के विषय वा शब्दमा दबाब दिन मिल्छ, के–केमा दिन मिल्दैन ? कसैले भेटेरै भनिदेओस् मलाई । मेरो फेसबुकमा कमेन्ट गरे पनि हुन्छ । bisnu[email protected] मा लेखे हुन्छ । मलाई ९८४२०२३२०५ र ९८१०५५४४०० मा फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ । स्वतन्त्र कुनै लेख लेखेर मलाई ट्याग गरे पनि हुन्छ । मेरो ब्लग पनि छ, महाप्रभा, एउटा फरक साहित्यिक प्रस्तुति । Fantus Fiction लेखेर गुगल सर्च गर्दा पनि म भेटिन्छु ।
यो सानो जानकारीपछि माथिकै प्रसङ्गमा फर्किऊँ । मैले त प्रमोद भाइलाई यतिसम्म भनेको थिएँ कि ‘भाइ यो लेख भोलिको तिम्रो पत्रिकामा जसरी भए पनि छापिनुप¥यो । यदि त्यसो गर्दा तिम्रो पत्रिकाको कुनै पानाको कुनै विज्ञापन हटाउनुपर्ने भयो भने पनि त्यो विज्ञापनको पैसा म दिन्छु,’ भनेको थिएँ । तर, अहँ प्रतिक्षणमा छापिएन मेरो लेख । पत्याएनन् भाइहरूले मलाई । दोस्रो दिन मैले ‘नसोध्नु मेरो पहाड’ शीर्षकमा अर्को लेख लेखेँ । यो लेख पनि मैले प्रतिक्षण दैनिकमा छाप्न आग्रह गरेँ । यो लेख पनि छापिएन । यो शीर्षकको लेख छापिँदा वा नछापिँदा के फरक पर्छ ? त्यसबारेमा म छुट्टै लेख्नेछु ।
त्यो दिन इनरुवाका पत्रिकामा मेरो लेख नछापिने स्पष्ट भएपछि मैले यसको वर्ड कपि इनरुवाका मान्छेहरूलाई सुनाउँदै हिँड्न थाले । पहिले धिरज भट्टराईलाई सुनाएँ । त्यसपछि राजेन्द्र पोखरेललाई सुनाएँ । यही सेरोफेरोमा लेखिएका लेखहरू शशि कोइरालालाई पनि कुनै सुनाएँ, कुनै लिङ्क खोजेर पढ्न आग्रह गरेँ । तर, अहँ, त्यति गर्दा पनि त्यो लेख इनरुवाका कुनै पत्रिकामा छापिन्छन् जस्तो प्रत्याभूति पाइनँ । तपाईहरूले पनि यी साथीहरूलाई भेटेर इनरुवामा हिजोआज सुविद गुरागाई के गर्दैछ ? के लेख्दै छ ? भनेर चर्चा गर्नुभएन कि कसो ! मलाई वर्णमाला दैनिकमा पनि यो लेख छापिन्छ जस्तो लागेन । शशि भाइको, राजेन्द्र भाइको अमर काफ्ले भाइको आँखामा त्यो प्रतिक्रिया देखिनँ । बीचमा शशि भाइले मलाई प्रश्न गरे, ‘सुविद गुरागाई पत्रकार हो ? शिक्षक हो ? काङ्ग्रेस हो ? कि के हो ? मेरो प्रिय भाइ शशि कोइरालाको मनमा यस्तो प्रश्न छ आज । इनरुवाबाट प्रकाशित हुने चर्चित मिडिया हाउसको मान्छेको मनमा यस्तो प्रश्न बसेपछि मन खङ्ग्रङ्ग हुन्छ । अब, यसभन्दा उताका प्रसङ्ग सुनाउनुअघि तपाईलाई प्रष्ट भनिदिऊँ म यतिबेला कुनै अखबारी आलेखमा रमाइरहेको छुइनँ । फन्टुस फिक्सनकै सेरोफेरोमा छु । आफूलाई नायक बनाएर आफ्नै कथा लेख्दै छु ।
साँझमा प्रमोद भाइलाई भेटेँ । प्रमोदले सुरुमै, दाइ यो लेखमा आचारसंहिता लाग्छ कि लाग्दैन भनेर सोधेका थिए । लाग्दैन भाइ लाग्दैन । यदि कसैले लाग्छ भन्छ भने पत्रकार महासङ्घका सभापति महेन्द्र बिष्ट मेरा साथी हुन् । म डिल गर्छु यो कुरामा भनेँ । तर, अहँ लेख छापिएन । इनरुवाका पत्रिकाले छाप्न रुचि नदेखाएको त्यो लेख मैले कैलाश पञ्चारिया, कौशल भट्टराई, वीरेन्द्र केएम, पिएमणि भट्टराई, नवीन गड्तौलाहरूको पहुँचसम्म पु¥याए । कसैलाई पढेरै सुनाएँ, कसैलाई लिङ्क खोजेर पढ्न आग्रह गरेँ । साँझ फेरि रामदेवको पसलमा किशोर कोइराला, सन्तोष तिवारी, विष्णु भट्टराई, रामदेव साह लगायतलाई मैले ‘मौन अवधिमा घोषणापत्रको प्रुफ रिडिङ’ र ‘नसोध्नु मेरो पहाड’ शीर्षकका दुई वटै लेखहरू सुनाएँ । लेख सुनेर रामदेव भाइ डराए । उनले ‘नसोध्नु मेरो पहाड’ शीर्षकमा परेको ‘रामदेवको चिया दोकानमा चिया खाँदै,’ भन्ने पदावलीबाट ‘रामदेव’ शब्द हटाउन आग्रह गरे । तर, मैले मानिनँ । कठै ! मेरो इनरुवा । रामदेव भाइ डराइडराइ चिया दोकान गरिरहेका छन् मेरो माटोमा । कसले सिर्जना ग¥यो यो परिस्थिति ? मेरो लेखले कि यहाँ हामीले रोपेको, हुर्काइरहेको वातावरणले ?
‘मौन अवधिमा घोषणापत्रको प्रुफ रिडिङ’ शीर्षकको लेखमा एमाले इनरुवा नगर कमिटिले निकालेको चुनावी घोषणा–पत्रका कुरा, त्यो लेख्न वा लेख्न लगाउने मान्छेको सोच र इनरुवाबासीको सरोकारको विषय उठाएको थिएँ । तर, लेख छापिएन । इनरुवाका नेटको सहज पहुँच नभएका जनताले समयमै त्यो सूचना थाहा पाएनन्, जुन म धेरैभन्दा धेरै इनरुवाबासीले चाँडोभन्दा चाँडो थाहा पाउन् भन्ने सोचिरहेको थिएँ । यसरी इनरुवाका धेरै जनताको चाँडो सूचना पाउने अधिकारलाई प्रभावित पार्ने यो घटना र त्योसँग जोडिएका सरोकारवलाहरूले कसरी लिनु पर्ने हो ? कृपया कसैले मलाई यो पनि भनिदेओस् ।
यहाँनेर एउटा अर्को कुरा पनि छ । म जसरी लेख्दै, मान्छेलाई सुनाउँदै, प्रतिक्रिया लिँदै, करेक्सन गर्दै हिँडिरहेको छु । एउटा लेखकले, एउटा पत्रकारले वा परिवर्तन चाहने जो कोहीले यस्तो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? म खुला बहसमा उत्रिएको छु ।
विचरा प्रमोद भाइलाई धेरैले हकर पत्रकार भन्छन् अझै पनि । यो मामलामा भने उनी निकै इमानदार देखिए । ‘दाइ मैले त छाप्न खोजेको थिएँ तर सकिनँ । मैले जागीर बचाउनु पर्ने भो दाइ’ भने । कठै ! एउटा पत्रकारले आफूलाई छाप्न मन लागेको कुरा आफ्नो पत्रिकामा छाप्न पाउँदैन । र पनि नागरिक समाज केही थाहा नपाए जस्तो गरिरहेको छ । एउटा इमानदार पत्रकारलाई जागीर बचाउँछस् भने बचा नभए जा भन्छ कुनै मिडिया हाउस सञ्चालकले ? यदि भन्छ भने हामीले आफ्नो माटोमा कस्तो खालको पत्रकारिताको अभ्यास हुर्काइरहेका छौँ ? एउटा सम्पादक जो अस्पतालभित्र पसेर चिकित्सकको हाजिर खातामा रातो लगाउँछ, त्यो सम्पादक सुविद गुरागाईसँग भेटेर फेस टु फेस कुरा गर्न चाहँदैन । के यही हो मेरो माटोमा मैले रोप्न चाहेको पत्रकारिताको बिरुवा र त्यसको परिणाम ? अहँ, होइन रोकौँ यो उल्टो गतिलाई । म नेतृत्व गर्छु । सचेत साथीहरू उत्रौँ इनरुवाका सडकहरूमा । यहाँ जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रभावित पार्ने जे जति तत्वहरू छन्, ती सबैलाई सच्याउनुपर्छ अब । हैट्, लेख्दा–लेख्दै निकै भावुक र चुनौतीपूर्ण कुरा लेखियो । एकछिन यसलाई यहीँ बिट मारौँ र छविनाथ सरको कुरा गरौँ ।
छविनाथ सर पत्रिका पढिरहनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कति भन्नु, कति सम्झाउनु, मान्दै मान्दैनन् ।’ लौ यो त झन् मार्मिक र गम्भीर कुरा भयो । जब पत्रिकाको सम्पादकले, सल्लाहकारले दिएको कुनै पनि सल्लाह मान्दैन भने प्रिन्टलाइनमा सल्लाहकार भनेर नाम किन जोडिराखेको ? कसलाई भ्रमित पारेको ? हामी इनरुवाका मान्छेलाई ? के हामी इनरुवाका मान्छे यति कुरा पनि बुझ्न सक्तैनौँ ? अवश्य सक्छौँ । तर, बुझ्दा–बुझ्दै धेर बुझिएला कि भन्ने पिरलो भइसक्यो ।
मैले त प्रमोद भाइलाई यतिसम्म भनेको छु, ‘हेर भाइ मलाई, छविनाथ सरलाई यसरी नरुवाओ तिमीहरू । यदि रुवाउँछौ भने म पनि तिमीहरूलाई इनरुवाको सडकमा रुँदै हिँड्ने बनाउँछु । त्यसो नगर भाइहरू । बरु मलाई हँसाओ र आफू पनि हाँस मसँगसँगै ।’
‘मौन अवधिमा घोषणापत्रको प्रुफ रिडिङ’ थाहा खबर डट कम र पूर्वी बजार दैनिकमा अक्षरशः छापिएको छ । तपाई हेर्न, पढ्न चाहनुहुन्छ भने लग इन गर्न सक्नुहुन्छ ।
हालसालै बङ्गलादेश हो कि कहाँको हो, एउटा ब्लगरलाई मन नपराउनेहरूले लेख्दालेख्दै मारि नै दिए भन्ने सुनेको छु । मलाई पनि त्यसरी नै मार्छन् होला एकदिन । यतिबेला मेरो मनमा त्यस्तै भय उत्पन्न भइरहेको छ । तर, यहाँनेर म मलाई मार्न चाहनेहरूलाई भन्न चाहन्छु, तिमीहरू जो, ‘अब अति भइसक्यो, अब सुविद गुरागाईलाई नमारे त हामीहरूले चैनले सुत्न पनि नपाउने रहेछौँ,’ जस्तो लागिरहेको छ भने ठिकै छ, मार मलाई । तर याद राख मेरो विचारलाई तिमीहरूले कहिल्यै मार्न सक्तैनौ । यस विषयमा तिमीहरूलाई म अहिले यति मात्रै भन्छु र अब छविनाथ सरसँग एकछिन कुरा गर्छु ।
‘छविनाथ सर अब म फेरि इनरुवा फर्किन चाहन्छु । इनरुवा फर्केर जयन्त सरको सालिक बनाउन चाहन्छु !’
जयन्त भट्टराईको नाम सुन्नेबित्तिकै छविनाथ सरका आँखा रसाइहाले ।
आउने त भनेँ तर आउने कसरी ? बाटो खोज्दै छु । यदि समाउने हात सही भेट्टाएँ भने म इनरुवा फेरि आइपुगुँला पनि । तर, गलत हातमा परेँ भने बिच बाटैमा कतै हराउन पनि सक्छु । जे भए पनि तपाई नरुनु छविनाथ सर ! आँसु पुछ्नु । किनभने इनरुवामा तपाई जस्तै म पनि रोएको छु धेरै पल्ट । तर, अब हामी रुने होइन । दाजु–भाइ सँगै मिलेर आफ्नो माटोमा हाँसो, खुसी, सुख र समृद्धिको रुख उमार्नुपर्छ ।